तपाई फोन नम्बरबाटै ह्याकिङको जाेखिममा हुनुहुन्छ ,जोगिने कसरी ? – Bikash Khabar
बुधबार, २९ बैशाख २०७८ गते ९:०५ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	45 Views
काठमाडौं,२९ बैशाख। दरो पासवर्ड राखेको छु, टु फ्याक्टर अथेन्टिफिकेशन पनि छ । यति हुँदा म सुरक्षित छु भन्ने सोच्नुहुन्छ होला । त्यसो होइन, तपाईंले आफूलाई सुरक्षित राख्न त्योभन्दा धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंले सोच्नु भएको होला तपाईंको सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा र बैंक अकाउण्ट नम्बर तपाईंको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नम्बर हुन् । तर, हिजोआज ह्याकरले सानो मेहनत गरेकै भरमा तपाईंको मोबाइल नम्बरमार्फत तपाईंको धेरै कुरा बिगार्न सक्छ ।
तर, तपाईं आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड र बैंक अकाउण्ट नम्बरजस्तो आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई सुरक्षित राख्न विषयमा भने कहिलै पनि सोच्नुहुन्न । किनभने मैले त्यसरी नम्बर दिएको खण्डमा मलाई कसले कल गर्छ ?तपाईं नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम जुनसुकै सेवा प्रदायकको मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेकाे भएतापनि तपाईंको मोबाइल नम्बर ह्याकरले सहजै टार्गेट गर्न सक्छ । अनि यसका लागि ह्याकरलाई झिनो मेहनत गर्दामात्रै पुग्छ ।
तपाईंको फोन नम्बर किन सुरक्षित राख्ने ?
तपाईंको असफताको लागि एउटा फोन नम्बर नै काफी छ । यस्ताे भन्दा नै तपाईंलाई धेरै ठूलो झड्का लाग्छ । सोच्नुस त तपाईंले आफ्नो मोबाइल नम्बर कति ठाउँमा प्रयोग गर्नुभएको छ ।
कुनै साइटमा लगइन गर्दा, कुनै सेवामा लगइन गर्दा, एपमा लगइन गर्दा तपाईंले आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रयोग गुर्न भएको छ । तपाईंको मोबाइल नम्बर तपाईंले कुनै एकाउण्टको पासवर्ड बिर्सिएको खण्डमा पासवर्ड रिसेटका लागि पनि प्रयोग हुन्छ ।
त्यतिमात्रै भएन सुरक्षित लगइनका लागि आवश्यक पर्ने टु फ्याक्टर अथेन्टिकेशनमा पनि तपाईंको मोबाइल नम्बर नै प्रयोग भएको हुन्छ । यस्तोमा यदि तपाईंको मोबाइल कसैले चोरेको खण्डमा यसका कारण केही हदसम्म ‘तपाईं’ नै हुनु हुनेछ ।
तपाईंको उक्त फोन नम्बरको मद्दतले अब उक्त ह्याकरले पासवर्ड रिसेट अप्सन प्रयोग गरी एकपछि अर्को गर्दै तपाईंको अकाउण्ट ह्याक गर्दै जानेछ ।
उक्त फोनको मद्दतले उसले बैंकको अटोमेटेड सिस्टमको फाइदा उठाएर त्यहाँबाट थुप्रै जानकारी लिन सक्नेछ । यतिसम्म कि तपाईंको पर्सनल म्यासेज, पर्सनल ईमेल लगायतका डेटा सार्वजनिक गर्न सक्छ ।
त्यसैले एकपटक सोच्नुस कि तपाईंको मोबाइल नम्बर कहाँ कहाँ प्रयोग भएको छ । अनि अब सोच्नुस् तपाईंको मोबाइल सुरक्षित राख्न किन आवश्यक छ ।
ह्याकरले तपाईंको मोबाइल नम्बर कसरी ह्याक गर्न सक्छ ?
तपाईंले सोचेको भन्दा यो धेरै नै सहज छ । तपाईंको मोबाइन नम्बर जहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा डेटा ब्रिच भएको अवस्थामा तपाईंको डेटा पनि लिक भएको हुनसक्छ ।त्योभन्दा पनि ह्याकरले आफ्नो टार्गेटको नम्बर इन्टरनेटमार्फत नै पत्ता लगाउने हो । उसले मोबाइल नम्बर पत्ता लगाएर टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई तपाईं बनेर कल गर्छ ।
टेलिकम सेवा प्रदायकले सोधेका साधारण प्रश्नको जवाफ दिएको भरमा उसले तपाईंको नम्बर आफ्नोमा परिवर्तन गर्न सक्छ ।नेपालको हकमा ह्याकरले कुनै नागरिकतामा तपाईंको नाम परिवर्तन गरेकाे भरमा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सहजै तपाईंको सिमकार्ड लिन सक्छ । यति भएसँग ह्याकरले तपाईंको फोनबाट म्यासेज पठाउन, कल गर्न तथा तपाईंको विभिन्न अकाउण्टमा सहजै एक्सेस प्राप्त गर्नसक्छ ।
यसमा बच्न सक्ने भनेको यदि तपाईंको टेलिफोन सेवाबिना कुनै कारण बन्द भयो भने तपाईंले तुरुन्तै उक्त मोबाइल नम्बरसँग लिंक भएका अकाउण्टहरुको पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । नत्र भने उसले पासवर्ड परिवतर्न गर्न भ्याएमा तपाईंको हरेक डेटा उसको हातमा पुग्नेछ ।अथवा तपाईंले प्रयोग गर्ने सिमकार्ड कसैले निकालेको खण्डमा के हुनसक्छ भन्ने विषयमा केही हप्ता अघिमात्रै नेपालमा भएकाे यो घटनाबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा त तपाईंले उक्त सिमकार्ड कहिलै पनि फिर्ता नपाउन सक्ने अवस्था पनि आउने सक्छ् । त्यसैले यस्तो घटना हुनुभन्दा घटना नै हुन नदिनु महत्वपूर्ण हो ।अथवा पूर्व सावधानी अपनाउनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । त्यसैले अब यहाँ हामी तपाईंलाई सिमकार्डलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौं ।
फोन नम्बर सुरक्षित राख्ने तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ ?
तपाईंले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित राख्न जसरी टु फ्याक्टर अथेन्टिकेशन राख्नु भएको छ, त्यसरी नै तपाईंले सिमकार्डलाई सुरक्षित राख्न सेकेण्डरी सेक्युरिटी कोड राख्न सक्नुहुन्छ ।त्यसका लागि तपाईंले सेवा प्रदायकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा कल गरेर अथवा अनलाइन मार्फत पनि यसलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले सेवा केन्द्रमा कल गरेर तपाईंले मेरो सिमकार्ड अथवा अकाउण्टमा सेकण्डरी पासवर्ड राख्न आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यो भएको खण्डमा तपाईंको उपस्थितिबिना तपाईंको सिमकार्ड कसैले झिक्ने अथवा परिवतर्न गर्ने अवस्था रहँदैन् । यो सेवा हेरेक सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएका हुन्छ । तर, उनिहरुले दिने सेक्युरिटीको लेभल भने फरक हुनसक्छ ।यदि एउटा सेवा प्रदायकसँग यो सेवा छैन भने तपाईंले आफ्नो सुरक्षाको लागि जुन सेवा प्रदायकले यो सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । उक्त सेवा प्रदायकको सिमकार्ड प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याइँदै
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने
नेपालमा नोकिया सि २० र जी १० लन्च
काठमाडौं, ४ असार एचएमडी ग्लोबल, द होम्स अफ नोकिया फोन्सले नोर्डिक इन्जिनियरिंगको नवीनतम दैनिक जीवनको मागहरु पूरा गर्नको लागि नोकिया सि